यी नायिकालाई मेकअप किन मन पर्दैन ? जान्नुहोस् कारण - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
यी नायिकालाई मेकअप किन मन पर्दैन ? जान्नुहोस् कारण
अभिनेत्री मेनुका प्रधानले आफ्नो अभिनयबाट निकै नै प्रशंसा बटुलेकी छिन् । उनले अभिनय गरेका प्राय सिनेमाले व्यवसायिक रुपमा सफलता पाएका छन् । सिनेमा रेशम फिलिलि, भिजा गर्ल, गाजलु, पुरानो डुङगामा मेनुकाको अभिनयलाई धेरैले तारिफ गरे । थियटर हुँदै सिनेमामा आएकी उनी अभिनयमा अब्बल त छिन् नै साथै पर्दामा सुन्दर पनि देखिन्छिन् । तर उनलाई प्रत्यक्ष देख्नेहरुले भने उनको सुन्दरतामा केही कमी भएको महसुस गर्छन् । बिशेष गरी अभिनेत्रीहरु आफूलाई चिरिच्याट्ट पारेर हिड्न मन पराउँछन् । तर मेनुका भने ठीक यसको उल्टो छिन् ।
मेनुका आफूलाई पर्दा बाहिर एकदमै सामान्य रुपमा प्रस्तुत गर्छिन् । पर्दामा कथाले मागे अनुसार रुप परिवर्तन गर्ने उनलाई अभिनेत्रीका लागि अत्यावश्यक कुरा मेकअप फिटिक्कै मन पर्दैन । उनले मेकअप मन पर्दैन भनिसकेपछि हामीले यसको कारण सोध्दा उनले भनिन्, “जब म मेकअप गर्छु एकदमै अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ । अनुहारमा केही आएर बसेको जस्तो लाग्छ । त्यस कारण एकदमै आनन्द र आरामले हिड्नका लागि म मेकअप नै गर्दिन ।”
मेकअप गरेपछि अनुहारमा केही वस्तु निकै नै अप्ठ्यारो गरी बसेको जस्तो महसुस हुने भएकाले नै मेनुका बिशेष फंशन र ईभेन्टहरु बाहेक अघिपछि कहिल्यै मेकअप गर्दिनन् ।
निर्माताले साइलीलाई सौता हाले, एकै दिन दुई सिनेमा
साइली उर्फ अभिनेत्री मेनुका प्रधानलाई राम्रो अभिनय भएकी अभिनेत्रीको रुपमा लिईन्छ । सिनेमा ‘रेशम फिलिलि’ र ‘गाजलु’मा उनको अभिनयको तारिफ ..
सर्वाधिक रुचाईएको गाजलुले एक दिनमै पायो झण्डै नौ लाख दर्शक
म लिभ ईन रिलेसनसिपमा छु विहे कहिले हुन्छ थाहाछैन- नायिका मेनुका प्रधान
‘पुरानो ढुङगा’को देश दौडाहा यात्रा सुरु